SomaliaReport: Shirkii Lagu Loollamay ee UN-ta Soo Afjarmay
Shirkii wada tashiga ee nabadaynta Soomaaliya ee ay soo qabanqaabisay UN-tu ayaa si rasmi ah arbacadii loogu soo gabagabeeyey caasimadda Kenya ee Nairobi. shirkan oo la isku mari waayey ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud ka kala socotay is-mamaul goboleedyada Puntland,Galmudug,Ahlu sunnah Wal Jamaaca iyo afhayeenka baarlamanka, mudane Shariif Xassan iyada oo ay jirtay qaadacaaddii ka timid aqlabiyadda sharci-dajiyeyaasha dawladda ku meel gaadhka ah oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo ra’iisal wasaarahaba.
Wakiilka arimaha Soomaaliya u qaabilsan UN.ta , Augustine Mahiga oo gunaanadkii shirka ka dib la hadlayey suxufiyiinta ayaa sheegay inay dhinacyadii is hayey isku wada raaceen soo afjaridda xilliga ku meel gaarka ah sida ku qeexan jaartarka federaalka taasoo keenaysa in doorashada madaxweynaha, guddoomiyaha Baarlamanka iyo ku xigeenadoodaba la qabto inta uusan dhamaan xilligii ku meel-gaarka ahaa, bishan August ee sanadkan.
Mahiga ayaa sidoo kale sheegay inay isku afgarteen kordhinta xilliga hay’adaha ku meel-gaadhka ah, sidoo kalena ay keeneen hinside ah in muddo kordhin laba sano ah loo sameeyey baarlamanka federaalka ee ku meel gaadhka ah.
Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay’adda International Crisis group isla markaana ku xeeldheer arimaha geeska Afrika ayaa sheegay in ahmiyadda shirkani ahayd bal in la helo mawqif laga midaysan yahay loogana gudbi karo xilliga ku meel gaadhka ah, wayse adag tahay in la helo isbeddel.
Ka soo qaybgalka guddoomiyaha baarlamanka ee shirkan iyada oo ay jirto qaaddacaaddii madaxweynaha iyo ra’saal wasaaruhuba ayaa markhaati ka ah kala-qaybsanaanta dhex taala dawladda ee ku salaysan xilliga iyo awoodda muddo kordhinta. Rashiid ayaa sheegay in ka soo qayb galka guddoomiyaha ee shirkan ay tahay boos riixasho uu ugu jiro hoggaanka dalka, hadday noqon lahayd mid madaxweynenimo ama inuu sii xajisto booskiisa guddoomiyenimo.
“Tallaabadan uu guddoomiyaha Baarlamanku qaaday ayaa ah inuu isu muujiyo nin ay hawshani dhab ka tahay”, “ Shaki kuma jiro inuu yahay nin himilooyin sare leh” ayuu yidhi Rashiid. Wuxuuna intaa sii raaciyey” waxaana muuqata inuu la samaysanayo beesha caalamka cilaaqaad hoose maadaama uu go’aankiisii kali-tashiga ahaa ku kala tageen Madaxweynaha iyo ra’iisal wasaarahaba”.
Dawladda ku meel gaadhka ah ee Soomaaliyeed oo xilligeedu ku ekaa Bishan August ayaa awood korosigii ay bishii Febraayo 3deedii gaadhay wuxuu qaybo ka mid ah beesha caalamka ku keenay xiisado.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska R’iisal wasaaraha ee Soomaaliya ayaa warbaahinada loogu sheegay sida looga xun yahay tallaabada Afhayeenka Baarlamanka. Waxaana ka mid ahaa “Guddiga ka qayb galaya shirkan Nairobi ee uu hoggaaminayo Guddoomiyaha baarlamanku kama haystaan awood iyo kalsooni toona golaha wasiirada”. In badan ayaana loo sheegay guddoomiyaha baarlamanka sida looga soo horjeedo qorshaha uu wato. Waxaana ka mid ahayd mooshin ay saxiixeen in ka badan 100 xildhibaan laguna diidan yahay tallaabadaa in la soo hordhigay afhayeenka, balse uu ka dhago adaygay.
Mid ka mid ah la taliye-yaasha guddoomiyaha baarlamanka kana gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wargayska Somalia Report ku yidhi “Guddoomiyaha baarlamanku waa hoggaanka iyo codkii xaqa ahaa ee matalayey dawladda”. Danjire Mahiga ayaa sheegay in arimihii ak soo baxay shirkan loo soo gudbin doono madaxweynaha iyo dawladda ku meel gaadhka ahba.
Danjiruhu wuxuu ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay labanlaabaan dadaalkooda kuna sii tallaabsadaan so oaf meeridda xilliga kala guurka iyo keenista nabad iyo amni.
Shir kale oo wada hadal ayaa bilaha soo socda lagu wadaa inuu ka dhici doono Soomaaliya waxayna UN.tu rajaynaysaa inay dawladda ku meel gaadhka ahi qayb ka ahaan doonto.